Wararka - Dhuuqitaanka albaabka joogsada nuugista rakibida-hordhaca habka joogsiga albaabka dabaqa
Albaabka albaabku waa qalab yar oo ka dambeeya albaab kasta oo ka hor istaagaya inuu albaabku garaaco darbiga. In kasta oo albaabka albaabku yar yahay, haddana saameyn weyn buu leeyahay. Qalabka albaabku wuu yareyn karaa buuqa wuxuuna ka hortagi karaa inuu albaabku ku dhaco derbiga oo uu waxyeello u geysto albaabka ama darbiga.
Rakibidda albaabka dabaqa
Dabaqa albaabka dabaqa rakibaadda - sharaxaad kooban oo ah albaabka
Qalabka albaabka ayaa sidoo kale loo yaqaan taabashada albaabka. Sidoo kale waa aalad nuugta oo raadisa caleemaha albaabka ka dib marka la furo si looga hortago inuu ku xirmo dabayl dhaceysa ama taabato caleemaha albaabka. Istaagayaasha albaabku waxay u qaybsan yihiin joojiyeyaasha albaabka magnetic joogto ah iyo joojiyayaasha albaabka elektromagnetic Joojiyeyaasha albaabka magnetka joogtada ah waxaa guud ahaan loo isticmaalaa albaabbada caadiga ah waxaana lagu xakameyn karaa oo keliya gacanta; joojiyayaasha albaabka elektromagnetic-ka waxaa loo isticmaalaa albaabbada dabka iyo qalabka kale ee albaabka iyo daaqadda elektiroonigga lagu kontoroolo, kuwaasoo labadaba gacanta ku haya iyo xakameyn otomaatig ah. shaqada xakamaynta.
Dabaqa albaabka dabaqa habka rakibaadda albaabka
Marka hore, la xaqiiji milkiilaha haddii albaabka albaabku ku rakiban yahay dhulka ama darbiga; ka dib u fur albaabka meesha ugu sarreysa ee loo baahan yahay si loo tijaabiyo in shaqada joojiyaha albaabku ay macquul tahay iyo in masaafada u dhexeysa albaabka iyo albaabku ay habboon yihiin. Albaabka albaabka Meel ka dib markii booska si qotodheer loo taagay, fur albaabka iskuna day in hawlgalka dhabta ahi macquul yahay, oo ay ku jiraan haddii albaabka iridjoogu waxyar soo galo ama xoogaa ka soo baxo, waa maxay xagasha gaarka ah ee albaabka istaaga ka dib markaad dhameyso booska, ku arag dhulka iyo marmarka dabaqa, marka hore Hel meesha albaabku istaago, isticmaal qalin si aad u xaqiijiso booska albaabka marmarka sagxada dhulka, macallinka shaqaalaha wuxuu adeegsadaa qalin si uu xarriiq ugu sawiro dhulka, marka hore xaqiiji meesha ugu dambeysa ee albaabku furan yahay, ka dibna xaqiiji booska ugu dambeeya ee rakibidda albaabka; sayidka shaqaaluhu wuxuu sameynayaa albaabka albaabka Calaamadda booska ugu dambeeya, sababta ay ugu baahan tahay in labo jeer la dhigo, si loo helo albaabka iyo albaabka albaabkiisa, waa in si fiican loo rakibo. Tani waa habka ugu wanaagsan ee lagu xaqiijin karo xagasha albaabka istaaga iyo furitaanka albaabka; shaqada xigta waa in la qodo laydh koronto oo la qodo godka rakibida ee albaabka albaabka dhulka. Shaqaaluhu wuxuu qodayaa godad dusha sare ee dusiyeen, shaqaalaha birta ah ee Aijia ayaa dhigaya. Foornooyinka sidoo kale runtii way xoogan yihiin. Goolhayaha albaabkani wuxuu u baahan yahay oo keliya inuu qodo god; dhamaadka gogosha albaabka ayaa la rakibay, oo furka kuyaala waa la adkeeyay. Qalabka albaabku wuxuu u qaybsan yahay dhammaad go'an iyo albaab albaab leh. Dhamaadka go'an wuxuu u baahan yahay in la rakibo. Adkee boolal ka hor, ka dibna u isticmaal kuleylka xagasha gudaha ee ku jira si aad u adkeeysid boorarka dhulka ama derbiga; adoo adeegsanaya xagal yar oo gudaha ah si aad u xoqdo boolalku waa shaqo fiican, khibrad ma leh, ka dibna sii maraya xaqiijinta booska, feer, iyo Nidaamka kulanka ka dib, hawsha xigta waa in la rakibo dhamaadka go'an ee dhulka. Adeegso aaladda xagalka gudaha ku jirta si aad u adkayso boorarka ku yaal dhammaadka go'an, iyo joojiyaha albaabka si otomaatig ah ayaa loo rakibayaa; dhamaadka albaabka albaabka albaabka waa lagu adkeyn karaa boolal. Faa'iido ma leh in la rakibo dhamaadka albaabka si loo nuugo nalka. Waa lagama maarmaan in la rakibo albaabka. Furaha ayaa ah in la helo dhamaadka albaabka. Habka ayaa ah in albaabka laga furo inta ugu badan, ka dibna la helo booska saxda ah ee albaabka, oo lagu adkeeyo albaabka albaabkiisa dhamaadka boolal. Nuugid; Si fiican u hagaaji xagasha dhamaadka go'an ee albaabka ka dibna si buuxda u adkeeya. Tallaabada ugu dambeysa ee rakibidda albaabka waa in si fiican loo hagaajiyaa xagasha albaabka si loo wada waafajiyo albaabka, ugu dambayntiina si fiican loo adkeeyo.
Daaqada albaabka dabaqeyaha rakibida-albaabka dayactirka
Si looga hortago kuuskuus inta lagu gudajiro qabashada albaabka; markaad nadiifinaysid albaabka albaabka, iskuday inaadan qoynin qeybaha birta ah. Marka hore, isticmaal maro jilicsan ama dun cudbi ah oo qallalan si aad uga saarto boodhka, ka dibna ku tirtir maro qalalan si ay u qalasho. Ha isticmaalin wakiilo nadaafadeed oo midab leh, ama si xoog ah u waxyeelee lakabka dusha sare.